🥇 Barnaamijka saldhigyada adeegga
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 965
Barnaamijka saldhigyada adeegga
Fiidiyowga barnaamijka ee saldhigyada adeegga
Dalbo barnaamij xarumaha adeegyada
Maareynta xarunta adeegga ma aha hawl fudud oo waxay u baahan tahay waqti iyo dhaqaale fara badan, gaar ahaan marka ay rugta adeegyadu bilowdo inay ballaadhiso qaybteeda ganacsiga, iyadoo u fidinaysa macaamiisheeda adeegyo badan oo kala duwan oo mid waliba u baahan yahay maamul kala duwan, xisaabayn, iyo waraaqaha talaabo kasta oo ka mid ah nidaamka hagaajinta gaariga ama adeeg kasta oo laga bixiyo saldhigga.
Maaha wax lala yaabo in inta badan maareeyayaasha saldhigga adeegga baabuurtu ay isku dayayaan inay helaan barnaamij ka caawin doona iyaga inay habeeyaan habsami u socodka shaqada xarunta iyo sidoo kale in la yareeyo tirada shaqo ee aadka u daallan in la qabto oo ay tahay in la sameeyo gacanta ha lagu sameeyo ama warqad ama guud ahaan software xisaabaadka sida MS Word ama Excel. Raadinta barnaamij noocan oo kale ah maahan wax sahlan maaddaama xaddiga xulashada suuqa loogu talagalay is-weydaarsiga ganacsiga iyo barnaamijyada maaraynta ay si aad ah u sarreeyaan, laakiin tayada ayaa aad u kala duwanaan badan oo waxay noqoneysaa arrin culus. Ganacsade kasta wuxuu doonayaa kaliya waxa ugu fiican ganacsigooda waana la fahmi karaa maxaa yeelay la'aan otomaatig sax ah macquul ma ahan in la balaariyo ganacsiga xarunta adigoon waqti badan iyo dhaqaale badan u hurin shaqaalaha fulin doona howlo badan oo waraaqo ah. Intaas waxaa sii dheer - maaraynta waraaqaha gacanta oo aan la isticmaalin barnaamij kasta runtii waa gaabis taas oo ka dhigaysa macaamiisha inay sugaan waqti aad u dheer - taasna maahan waxa ay macaamiisha jecel yihiin. Waxay doorbidi doonaan inay soo booqdaan xarun kasta oo adeeg oo ugu adeegi doonta iyaga si ka dhakhso iyo wax-qabad badan tan wali isticmaasha waraaqaha gacanta oo ah habka xisaabinta ugu weyn.
Sidii aan horay u soo gabagabeynay, waa wax aan macquul aheyn in xitaa xoogaa lagu tartamo suuqa iyada oo aan la adeegsan nooc kasta oo qalab otomaatig ah, laakiin mid ka mid ah soo qaadashadu waa hawl aad u adag oo lafteeda lafteeda ah. Waxay nooga tagaysaa su’aasha - barnaamijkee ayaan xulanaa? Maxaa uqalma inuu noqdo barnaamij xisaabeed wanaagsan ama mid xun? Aynu ku kala jabinno waxa aan u baahanahay barnaamijyada noocan oo kale ah inaan ku qabanno meesha ugu horreysa.
Xarun kasta oo adeeg waxay u baahan tahay barnaamij awood u yeelan doona inuu la socdo xogta keydkiisa iyo socodka macluumaadka si dhakhso leh oo hufan. Awood u lahaanshaha helitaanka nooc kasta oo macluumaad ah waa magaca macaamilka, taariikhda booqashada, sumadda baabuurkooda, ama xitaa nooca adeegga ee la siiyay ayaa si aad ah muhiim u ah marka lala macaamilayo macaamiisha soo noqnoqda ama dhibaatooyinka leh. Barnaamijka noocan oo kale ah waa inuu awood u yeeshaa inuu la shaqeeyo xog ururin dhab ahaantii dhakhso badan, laakiin maxaa loo baahan yahay si taas loo gaaro? Ugu horreyntii - interface interface fudud oo la fahmi karo oo aan waqti u qaadan doonin barashada iyo adeegsiga iyo marka labaad barnaamijka waa in si fiican loo hagaajiyaa, sidaa darteed uma baahna qalabka kombuyuutarka ugu dambeeyay si dhakhso leh loogu shaqeeyo. Marka la isku daro labadan arrimood waxaan ku guuleysan karnaa shaqo hufan oo dhaqso leh keydka macluumaadka.
Marka xigta, waxaan rabnaa inaan hubinno in barnaamijkeenu soo ururin karo oo uu soo sheegi karo dhammaan xogta maaliyadeed ee ay idaacaddu u soo saarto maalin kasta, bille, ama xitaa sanadkiiba mar haddii iyada oo aan la helin warbixinnada noocaas ah ay si aad ah u adag tahay in la arko xoogga iyo daciifnimada shirkadda iyo sidoo kale koritaankeeda iyo horumarinteeda waqti ka dib. Adeegsiga macluumaadka noocaas ah waxay u oggolaaneysaa sameynta go'aanno macquul ah oo saameyn ku leh ganacsiga iyo sidoo kale in la arko waxa ka maqan shirkadda iyo wixii ka badan. Haddii barnaamijka maamulka doorashada sidoo kale soo saari karo garaafyo iyo warbixinno la dhisayo oo ay cad yihiin oo kooban waxay noqon doontaa faa'iido xitaa ka sii weyn in la helo iyo wax aysan ganacsatada badan ee bilowga ahi ka fekerin markay ka soo qaadayaan barnaamijka saxda ah shirkadooda.
Kadibna shuruudda weyn ee soo socota ee ah in barnaamijka maareynta ay tahay inuu buuxiyo ayaa ah is-dhexgalka isticmaalaha. In kasta oo marka hore aysan u muuqan doonin wax weyn - runti waa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee lagu xulanayo dalabka saxda ah ee shaqada. Barnaamijka xisaabinta wanaagsan wuxuu leeyahay qaab fudud oo fudud oo lagu fahmi karo isdhaafsiga isticmaale ee qof walba fahmi doono, xitaa dadka aan khibrad yar u laheyn la shaqeynta codsiyada kombiyuutarka iyo barnaamijyada maamulka ganacsiga, ama xitaa aan khibrad u laheyn kombiyuutarada guud ahaan. Haysashada isdhexgalka isticmaalaha ee sida fudud loo fahmi karo waxay muhiim u tahay in waqti iyo kheyraad looga badbaadiyo shaqaalaha tababarka ku saabsan sida loo isticmaalo iyo guud ahaanba wax weyn ayey u tahay barnaamij ganacsi kasta.
Ka dib markaan tixgelinno wax kasta oo aan horay u soo sheegnay, waxaan dooneynaa inaan kuu soo bandhigno xalka barnaamijkeena khaaska ah ee loogu talagay dhammaan waxyaabaha aan soo sheegnay ee maanka ku haya - USU Software. Barnaamijkeenu ma aha oo kaliya wax kasta oo hore loo soo sheegay laakiin wax badan iyo inbadan oo kale, taas oo runtii noqon doonta mid wax weyn ka tareysa shirkad kasta oo ka shaqeysa adeegga baabuurta.
Iyada oo gacan laga helayo Software-ka USU, waxaa suurtagal ah in la abaabulo hal macmiil oo mideysan. Waxaad awoodi doontaa inaad ka hesho macaamiil kasta dhowr guji oo keliya magacooda, lambarka gaariga, ama arrimo kale oo kala duwan. Macluumaadka ku saabsan dhammaan macaamiisha waxaa lagu keydin doonaa keyd khaas ah oo ku xirnaan kara internetka si loo maareeyo xarumo badan oo adeeg isla mar ah.
Barnaamijkeenu wuxuu kaloo duubi karaa xogta macaamiisha hadhow la adeegsan doono oo aan xasuusin karno adeegga adoo u diraya fariin cod ah, SMS, ama xitaa wicitaan ‘Viber’ ah. Adeegsiga barnaamijkeena, sidoo kale waa lagu xisaabin karaa mushaharka shaqaalahaaga iyadoo arrimo badan la tixgelinayo inta xisaabinta la sameynayo, sida nooca shaqada ay qabteen, tirada saacadaha shaqada lagu qaatay, iyo tayada waa
Soodejiso Barnaamijka 'USU Software' maanta oo bilow otomatiga ganacsigaaga si dhakhso leh oo hufan!
Howlaha gawaarida iyo qeybaha gawaarida
xisaabinta xarunta adeegga
Xisaabinta kharashka dayactirka
xisaabinta adeegga gawaarida
xisaabinta baabuurta dayactirka
xisaabinta dayactirka baabuurta
xisaabinta mashiinada dayactirka
Xisaabaadka howlaha xarunta adeegga
Sharciga aqbalaada wareejinta ee dayactirka
Ficil helida gaari
codsi loogu talagalay rugaha adeegga
qalabaynta otomaatiga ee xarunta adeegga
Xisaabinta saacadaha adeegga gaariga
Barnaamijka xisaabinta ee adeega gawaarida
Barnaamijyada dayactirka baabuurta iyo dayactirka
Agabfudud xisaabinta adeegga gawaarida
Falanqaynta adeegga gawaarida
Gawaarida adeegga Gawaarida
kontaroolka adeegga gawaarida
Diiwaanka adeegga gawaarida
Saacadaha adeegga gawaarida
maamulka adeegga gawaarida
Faa'iidada adeegga gawaarida
Barnaamijka adeegga gawaarida
warbixinta adeegga gawaarida
barnaamijka adeega gawaarida
Shahaadada aqbalashada Baabuurka
Xeerka wareejinta gawaarida
Xakamee xarunta adeegga
Xakameynta gawaarida ee dayactirka
Xakamaynta howlaha dayactirka
Xakamaynta shaqooyinka adeegga gawaarida
Xisaabaadka macaamiisha ee adeegga gawaarida
Sida loo xafido diiwaannada adeegga gaariga
Barnaamijka xisaabinta mashiinka
Nidaamka dayactirka iyo mashiinka dayactirka
maaraynta adeega gawaarida iyo iibinta gawaarida
Maareynta xarumaha adeega
Nidaamka maamulka ee rugta adeegga
Barnaamijka xisaabinta otomaatiga
Barnaamijka xisaabinta bakhaarka qeybaha gawaarida
Barnaamij xisaabinta xarumaha adeega
Barnaamij loogu talagalay is-adeegga
Barnaamij loogu talagalay qaybaha baabuurta
Barnaamijka bakhaarka qeybaha gawaarida
Barnaamij xisaabinta qiimaha dayactirka gaariga
Barnaamij xisaabinta saacadaha
Barnaamijka dayactirka baabuurta
Barnaamij loogu talagalay adeegga gawaarida
Barnaamijka xisaabinta macaamiisha ee adeega gawaarida
Barnaamij loogu talagalay mashiinnada dayactirka
Barnaamijka iibinta qeybaha otomaatiga
Barnaamij loogu tala galay xarumaha adeega
Barnaamij loogu talagay xisaabaadka qaybaha
Barnaamijka ganacsiga ee loogu talagalay qaybaha baabuurta
Barnaamij loogu talagalay bakhaarka qeybaha gawaarida
Diiwaan geli rugta adeegga
Codsiyada adeegga gawaarida
Codsiyada saldhigyada adeegga
Maamulka xarunta adeega
Qaybi xisaabaadka iibka qeybaha
Nidaam lagu xakameeyo xarumaha idaacadaha
Nidaamka dayactirka baabuurta
Nidaamka xarunta adeegga
Shahaadada aqbalaadda gawaarida
Shahaadada aqbalaadda wareejinta gaadiidka
Xawaaladda wareejinta gaadiidka